Timisoara, ine runako rweRomanian | Kufamba Nhau
Mariela Carril | | Chii chekuona, Romania
Eastern Europe Icho chishamiso chemagumo. Mazana emakore enhoroondo uye zvematongerwo enyika zvasiya mucherechedzo uye kune maguta akanaka kwazvo. Semuyenzaniso, Timisoara, muRomania.
Timosara ndiro guta rechitatu pakukura munyika uye nzvimbo huru kumadokero kweRomania. Tichaona nhasi nei ichizivikanwa se Vienna Mudiki kana the Guta remaruva...
Iro zita rinobva kuHungary uye pekutanga misha inodzoka munguva, kunyangwe kuvaRoma. Zvino zvinoitika muMiddle Ages, kutenderedza nhare yakavakwa naCharles I weHungary, uye zvaizivikanwa kuva munguva dzehondo pakati pevaKristu nevaTurkey veOttoman, guta riri pamuganhuku. Naizvozvo, yakatambura kukombwa uye kurwiswa kusvika yaramba iri mumawoko eOttoman kweinopfuura zana nehafu.
Timisoara akawanikwazve naPrince Eugene weSavoy muna 1716 uye akaramba ari mumaoko evaHabsurgs kusvika pakutanga kwezana ramakumi maviri. Mushure mehondo yekutanga yenyika Hungary yakapa guta kuRomania, uye munguva yeHondo Yenyika II yakatambura zvakanyanya. Pakupedzisira, yakauya pasi pekutenderera kweSoviet, huwandu hwayo hwakawedzera uye hwakasimudzwa.
Guta iri mubani reBanat, padhuze nekuparadzaniswa kwenzizi Timis naBega. Kune chinyoro-nyoro pano uye guta racho raive kwenguva yakareba ndiyo chete nzvimbo yaunogona kuyambuka nzvimbo iyoyo.
Muchokwadi, zvakare yakashanda sedziviriro, kunyangwe iko kuswedera kwemunyoro kwakanyanya kwakaunza zvipembenene zvakawanda kwairi. Muzana ramakore rechiXNUMX, nekuda kwemabasa eruzhinji, guta rakatanga kuve pamugodhi weBega uye kwete parwizi rweTimis, ipapo zvese zvakagadziriswa.
Pachinyakare rave riri guta rakakumikidzwa mukugadzira, dzidzo, kushanya uye kutengeserana. Nhasi ine Yekutakura system iine mitsara minomwe yetram, mitsara misere yetrolley uye anopfuura anopfuura makumi maviri mitsara yebhazi Zvakare kune mabhasikoro eruzhinji ine zviteshi makumi maviri neshanu nemabhasikoro mazana matatu anogona kushandiswa mahara, zvese nevagari vemo uye vashanyi, uye kune vaporetto inofambisa mugero. Zve kuruzhinji.
Iro guta harina mamuseum akawanda semamwe maguta eEurope, asi kana usiri mutsika tsikidzi iwe ungafarire pfungwa yekusafanirwa kushanyira mamuseum uye maberere zuva rese. Saka, Timisoara anotipa iyo mashoma emuseum inonakidza:
el Timisoara Museum yeArt Iri muUnirii Square uye chivakwa chezana ramakore rechi 10. Kune yemuno, yazvino, yekushongedza hunyanzvi, mifananidzo uye zvakavezwa uye yeEuropean hunyanzvi uye kazhinji kune zviratidziro uye zviitiko. Kubvuma kunoita RON 10 uye kuvhura kubva Chipiri kusvika Svondo kubva 6am kusvika XNUMX pm.
el Banat National Museum inomiririra dunhu. Inoshanda muHuniade Castle, pakati peguta, muchivako chekare kwazvo muguta. Kune akatiwandei madhipatimendi: archeology, nhoroondo, zvakasikwa sainzi uye zvakare iyo Traian Vuia Museum, yakatsaurirwa kune muRomania muvambi wezita rimwe chete, piyona wekubhururuka.
el Village Museum Iri kumucheto kweTimoaraara, munzvimbo yakasvibirira uye inoratidza mushe chaizvo uri musha chaiwo. Iyo ine zvivakwa zvakati wandei, kereke uye chigayo, zvese zvechivanhu uye zvine masitayera kubva panguva dzakasiyana nematunhu muBanat. Kufamba kwakanaka uye padhuze ne zoo kuti iwe ugone kushanyira nzvimbo mbiri idzi. Iwe unosvika nebhazi uye yekupinda inodhura 5 RON. Iine nguva yezhizha uye yechando.
el Communist Consumer Museum haisi yechinyakare. Iyo imwe musimamende isingawanzo inoratidza iyo chaiyo nguva yemakomunisti yeguta. Inoshanda mukamuri repasi peScart Bar, mune imwe imba yekare ine gadheni hombe. Iyi inzvimbo ine hushamwari yakashongedzwa zvakanaka. Iko kuunganidzwa kwemuseum uko kune zvese uye kwakaumbwa nezvipo kubva kushamwari nevashanyi. Zvese zvine chekuita nenguva yemakomunisti. Iwe unowana icho paSzekely Laszlo 1 Arh.
el Chirangaridzo cheRevolution rangarirai gore 1989 apo Soviet Union yakaparara. Shanduko muRomania yakatanga muno muTimisoara uye inozivikanwa muguta. Saiti iyi inofanirwa kunge iri yenguva pfupi uye kuti pane imwe nguva kuchave nemuseum pamusoro payo. Chirangaridzo chiri paCalle Popa Sapca, 3-4 uye iyo yekupinda inodhura 10 RON. Inovhura kubva Muvhuro kusvika Chishanu, kubva 8am kusvika 4 pm uye Mugovera kubva 9 am kusvika 2 pm.
Sezvauri kuona, kune mamiziyamu mashoma saka pane nguva yakawanda yemamwe marudzi ekushanya. Timisoara iguta rakakura rine nhoroondo kubva kungangoita zana regumi nemana, saka ikozvino fambai munzira dzaro Icho chishamiso.
Naizvozvo, pakushanya kwekutanga haufanire kupotsa mamwe mapoinzi kunyanya. Sezvinei, iyo Union Square, inova ndiyo dangwe muguta. Zita rayo rakadzokera muna 1919, mushure meHondo Yenyika Yekutanga, mauto eRomania paakaungana pano mushure mekupinda muguta.
Ane a baroque mhepo uye zvivakwa zvakakomberedza iSerbia Orthodox Church, Roma Katurike, Brück House neBaroque Palace. Zvese zvakanaka kwazvo. Kune zvekare maresitorendi, saka muzhizha zvinonakidza kugara uye vanhu-kutarisa. Imwe nzvimbo inonakidza ndeye Victoria Square, inozivikanwawo seOpera Square. Zita idzva iri mushure mekudonha kwechikominisiti.
Iyo mraba yakakomberedzwa nezvivakwa zviviri zvekufananidzira: iyo Kereke yeOrthodox kubva kumaodzanyemba uye iyo National theatre kubva kurutivi rwokumusoro. Iyo yakavakwa muzana ramakumi maviri kutsiva yekare medieval citadel, saka ine Art-Noveau inzwe uye inoitirwa famba-famba, nezvitoro, maresitorendi nematanda. Kana iwe ukaenda paKisimusi, kune iwo musika weKisimusi.
Imwe huru kukwira ndeye famba uchitevedza mahombekombe erwizi Bega. Kana kuita bhasikoro rekushanya. Zvakanaka pazuva rine zuva uye iwe unogona kubva kubva kumagumo kuenda kumagumo eguta, kuyambuka mapaki aro makuru. Muzhizha kune materu mazhinji kwaunogona kunakirwa nedoro rinotonhora uye kana zuva rovira inzvimbo inozivikanwa zvikuru.
Chekupedzisira, ndinoda kubhururuka pamusoro pemaguta uye pano iwe unogona kuzviita nendege. Iyo ndege ndeye hafu yeawa uye inodhura yakatenderedza 75 euros. Uye kana zuva ranyura uchida kubuda kuti uone vanhu, nerombo rakanaka guta rine inoshanda hupenyu hwehusiku. Iyo hyper inozivikanwa saiti ndeye D'arc, muUniiri Square. Mumhanzi wakanaka, mitengo yepakati, inozivikanwa nevatorwa uye expats. Neraki inovhura nguva, kubva na11 pm kusvika 5 am.
Imwe nzvimbo yehusiku ndeye Reflektor, iyo yakavhurwa muna 2017, konzati horo. 80's Pub Iyo ndeimwe yemazhinji maabhu muTimoaraara kwaunogona zvakare kunwa, kutamba. Haisi pakati, asi kana iwe uchibva kuma80s zvakakodzera kushanyira yunivhesiti kambasi. Taine uye Kutiza dzimwe nzvimbo dzekutamba nekunakidzwa.
Wakafarira Timisoara here? Inzvimbo inosvika (doro rinodhura kutenderera 1 euros, masikati 25), Iri pedyo nemaawa matatu chete kubva kuBudapest neBelgrade uye mashanu kubva kuVienna.
Iri iguta iro rudo tsika, firimu uye mitambo yemitambo, ane yakanaka gastronomy uye vanhu vakanaka uye tsika nemagariro. Dhizaini yaro yakanaka, ine nhoroondo, ine husiku husiku, vanhu vanotaura zvakanyanya Chirungu uye sechokwadi chenhoroondo, Timisoara ndiro raive guta rekutanga kuzvisunungura mushure mekudonha kwechikominisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Getaways Europe » Romania » Timisoara, ine runako rweRomania